GV Face: Nilaozany Handeha Hiaina Toy Ny Mpialokaloka Any Eoropa I Brezila · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 29 Janoary 2016 16:26 GMT
Niasa hatrany tao amin'ny kabinetra iray tao Sao Paulo ilay Breziliana mpiaro zon'olombelona sady mpisolovava momba ny heloka bevava, Edgard Raoul. Taorian'ireo volana vitsy nahatsapàny ho tsy nahavita nanao na inona na inona rehefa nahita ireo sary sy lahatsary momba ireo olona nandositra an'i Siria sy ireo faritra hafa misy fifandonana, ka manao dia lavitra ezaka mamakivaky an'i Eoropa, dia nialàny ny asany ary nilaozany ny fiainany.
Tiany hiainana ny zavatra sedrain'ireo mpitsoa-ponenana nandositra nankany Eoropa. Tao Tiorkia no nanombohany ny diany, avy eo nankany amin'ireo nosy Grika Lesvos, Athens, mandalo an'i Idomeni miditra an'i Makedonia, Serbia, Slovenia, Kroatia, Aotrisy sy Alemaina. Teny amin'ny lalàna rehetra nizorany dia niara-niaina tamin'ireo mpitsoa-ponenana izy.
Ny mpiaramiasa aminay ao MENA, Faten Bushehri, no nitafa tamin'i Edgard tao Amsterdam, toerana ialàny sasatra eo am-panomanana ny diany ho any Afovoany Atsinanana. Ambarany fa tiany ny hahatakatra ny toerana niavian'ireo mpitsoa-ponenana.
Ao anatin'ity ampahany amin'ny GV Face ity, manontany an'i Edgard izahay momba izay nandrisika azy handao ny fiainany taloha, sy izay zavatra azony tamin'ny fihaonana ary fiarahana niaina tamin'ireo mpitsoa-ponenana.
Edgard mitrotro zanaka mpitsoaponenana izay zara raha tafitra tamin'ireo rano mahery teo anelanelan'i Gresy sy Tiorkia. Sary natolotr'i Edgard. Nopihana tao Lesbos.
Nandritra ilay tafa, noresahan'i Edgard ny momba ny iray tamin'ireo zavatra faran'izay nahazendana niainany n andritry ny diany — famonjena zazavavy kely iray :
Zazakely iray tsy misy aina no teny an-tsandriko (sady nisaina hoe) tsy rariny. Tena tsy rariny tanteraka.. Zazakely anie io e. Hoy aho hoe :'miangavy, mifohaza, mifohaza, vitanao ilay izy. Tsy rariny raha izao no fotoana hahafatesanao. Vao tonga eto Gresy mihitsy ianao. Ndao moa e. Ndao tohizana ny dia. Napetrako teo an-tratrany ny tànako ho andrana hihainoako ny fidoboky ny fony…ary dia afaka nahatsapa zavatra aho. Taorian'ny 5 hatramin'y 7 minitra, nanomboka nanokatra ny masony izy. Ary nentiko namonjy mpitsabo ka nihazakazaka aho avy eo ho eny amin'ny rainy hanome azy ny filazàna..fantatrao moa…velona ny zanakao vavikely, ndeha isika ho any…velona ny zanakao vavikely! Io no azoko antoka fa fotoana tena henjana indrindra, efa maty no nandraisako azy.